IDiesel Engine Market ilinganiselwa ukuthi izofinyelela ku- $ 332.7 Billion ngo-2024 ekhula ku-CAGR ka-6.8% kusuka ngo-2020 kuya ku-2024
Injini yedizili iyinjini yangaphakathi yomlilo lapho umoya ucindezelwa kushisa elanele ngokwanele ukushisa uphethiloli ogonyelwe kwisilinda, lapho ukwanda nokusha komlilo kubangela khona ipiston. I-Global Diesel Engine Market ilinganiselwa ukuthi izofinyelela ku- $ 332.7 Billion ngo-2024; ikhula ku-C ...
IZINTO eziyisithupha eziyinhloko okufanele uzicabangele ngaphambi kokuthenga i-diesel generator
Ama-generator odizili asephenduke impahla ebaluleke kakhulu ezweni lanamuhla, hhayi nje kuphela kubaninikhaya kodwa nasezimbonini zamabhizinisi nezinhlangano. Ama-generator odizili awusizo ikakhulukazi ezindaweni ezingenawo ugesi onokwethenjelwa ngakho-ke i-generator ingasetshenziswa ukuhlinzeka ...
Ungaliqamba Kanjani Igumbi LeGenset Ngokufanele
Amandla athembekile abalulekile kuzo zonke izikhungo, kepha kubaluleke kakhulu ezindaweni ezifana nezibhedlela, izikhungo zemininingwane, nezisekelo zamasosha. Ngakho-ke, abaningi abathatha izinqumo bathenga amasethi okwenza ugesi (ama-gensets) ukunikezela ngezinsiza zabo ngesikhathi esiphuthumayo. Kubalulekile ukucubungula ukuthi kuphi ...
Ungayikhetha Kanjani i-Diesel Generator
Ama-generator ahlukaniswe ngezinhlobo ezahlukahlukene, njenge-generator kadizili, i-generator kaphethiloli, i-generator ephathekayo, i-generator ye-trailer, i-generator ethule kanye ne-generator yezimboni nokunye. I-generator ye-Diesel kanye ne-generator ethule zithandwa kakhulu ngoba ukusetshenziswa kwazo kabanzi futhi kusetshenziswa kakhulu uphethiloli ...
Udizili Usetha Amathuba Amakhulu Okukhula Kwezimakethe Namathrendi Ku-2025
IDizili Generator Isetha Ukubukwa Kwemakethe, Ukuhlaziywa Okuphelele kanye Nezigaba Ezinkulu Nezibikezelo, 2020-2025. Umbiko wemakethe ye-Diesel Generator Sets ungumthombo obalulekile wemininingwane yosomaqhinga bebhizinisi. Inikeza ukubuka konke kwemboni ngokuhlaziywa kokukhula kwemakethe ngomlando & a ...
I-240kw Generator, Amanani we-Generator, Izintengo ze-Diesel Generator, I-Generator Encane, I-Alternator KaChery, Idizili edonsa amandla enenjini yeKubota,